I-NCC izophenya ngeCrowd 1
NGABE libuyile ibhanoyi lakwaCrowd 1? Lona ngumbuzo abaningi abazibuza wona emuva kokuthi iNational Consumer Commission (NCC) iqinisekise ukuthi ithole isikhalo ngeCrowd 1.
INCC ithe izophenya ukuze ithole kabanzi ngoCrowd 1 bese uma ithola ukuthi iphula umthetho iConsumer Protection Act (CPA) izobe isiqala izinhlelo zokuyishushisa.
INCC ikhumbuze abantu ukuthi kuyicala ukutshala imali ebhanoyini nokuheha abanye abantu ukuthi batshale imali yabo kulo.
UKhomishana osabambile weNCC, uNksz Thezi Mabuza, uthe abantu kufanele babuze ukuthi inkampani abafuna ukutshala kuyo imali isemthethweni yini ngaphambi kokuthi bafake imali yabo kuyo.
“Ukuqubuka kweCovid-19 kuphazamise umnotho, kwenza abantu ukuthi bafune izindlela zokwenza imali esheshayo. Isigaba 43 seCPA sikwenza kube yicala ukuthi abantu batshale imali emabhanoyini nokuthi bahehe abanye. Uma inkampani ikuthembisa inzuzo enkulu kakhulu kufanele ubone ukuthi kukhona okushaya amanzi.”
Isolezwe libhale kakhulu ngoCrowd 1 ngonyaka odlule lixwayisa abantu ukuthi inkampani kayikho emthethweni.
Ezinkundleni zokuxhumana abantu bebebuzana ukuthi ngabe usubuyile yini uCrowd 1.
IFinancial Sector Conduct Authority (FSCA), elawula izinkampani ezisebenza ngemali, ithe ixwayise abantu ngoCrowd 1 yaveza nokuthi kayinalo igunya lokusebenza ngemali.
“ICrowd 1 ayibhalisiwe njengeFinancial Service Provider (FSP), ayinayo imvume yokusebenza ngemali. Ayikaze ifake nesicelo sokusebenza ngemali kithina siyi-FSCA. Udaba lwayo siludlisele kwiPrudential Authority kwiSouth African Reserve Bank. Siyacela umphakathi ungafaki imali yawo ezinkampanini ezingenayo imvume yokusebenza ngemali,” kusho abeFSCA esitatimendeni.
Bacele abantu ukuthi ngaphambi kokutshala imali enkampanini ebathembisa inzuzo enkulu babheke ukuthi ngabe isemthethweni yini ngokushayela iFSCA ku-0800 110 443 noma bavakashele isizindalwebu seFSCA esithi www.fsca.co.za ukuthola imininingwane yezinkampani abasuke befuna ukutshala kuzo imali.